La Yaabka aduunka: Nin aroosay haweenay geeriyootey (Warbixin yaab leh) – SBC
La Yaabka aduunka: Nin aroosay haweenay geeriyootey (Warbixin yaab leh)
Posted by editor on January 22, 2012 Comments
In aduunka qoloba wixii la wanaagsanaada ay ku dhaqaaqdo qolona qalad iyo qalooc uu la noqdo shaki iyo dood kama taagna, waana halka ay Soomaali ka tiri Nin wax la toosanbaa nin la tuur leh)
Hadaba ma halagaa sheegaa mise waa magac & maamuus raadis mise waaba waali & madax wareer nin, mase waaba diin la’aan wayba tahey iyo iimaan la’aan, nin lagu lagu magacaabo Chadil Deffy oo loo yaqaan Deff Yingyuen ayaa ku dhaqaaqay wax aan horay loo maqal loona arag ka dib markii uu go’aansadey in uu guursado haweenay geeriyootey oo ay saaxiibo ahaayeen oo ayu ku balansanahaay inay is guursadaan.
Chadil oo u dhashay dalka Thailand waxay mudo is jeclaayeen oo ay guur ku wada balameen Ann Kamsuk balse intii aanba guur la gaarin ayey geeriyootey, hase yeeshee Chadil wuxuu qaatey go’aan in uu mehersado saaxiibtiis oo meyd ah oo uu galiyo dharka arooska isla markaana faraantiga meherka gacanta bidix mid ka mid ah faraha uu u galiyo.
Cladil ayaa ku soo labistey Suit madow isagoo madaxa gashaday koofi ookiyaale madowna indha gashaday ka dibna qabrigii haweenaydaasi lagu aasi lahaa ayuu ku dul qabtey xaflad kooban oo nikaax oo uu ku sheegayo in gacalisadiisa meydka ah uu aroosayo.
Dhacdadan oo ka dhacdey magaalada Surin ee dalka Thailand ayaa ninkaasi wuxuu sawiradii nikaaxa haweenayda geeriyootey uu soo galiyey facebook-giisa, waxaana sawirada nikaaxaasi wadaagay 50 kun oo qof taasi oo u muuqatey inay aheyd sheeko aad loola yaabay loona xiiseynayey.
MUUQAAL VIDEO HOOS KA DAAWO:
Lamaanahan ayaa mudo laga joogo 10 sano ka hor waxay isku barteen Jaamacada Eastern Asia university ee magaalada Bankook, iyagoo wixii xiligaasi ka dambeeyey ahaa saaxiibo guur qorshahoodu ahaa, balse 3-dii bishan January ayaa Ann oo 29 sano jir aheyd waxay ku geeriyootey shil baabuur sida ay shaacisay jariirada Pattaya Daily News ee ka soo baxda magaalada Bankook ee caasimada Thailand oo sheekadan baahisay.
Chadil ayaa sheegay in qorshuhu ahaa inay gacalisadiisa Ann ay is guursadeen xili hore balse uu mashquul ku ahaa waxbarashadiisa, taasi oo dib u dhigtey arooska ka hor intii aanay geeriyoon Ann, balse uu go’aansadey in riyadoodii uu isagu si gaar ah u fuliyo oo uu mehersado haweenadaasi oo geeriyootey.
Xaflada meherkaasi waalida ah waxaa ka soo qayb galey caa’ilada haweenayda geeriyootey iyo ninka aroosku madaxa marey, saxafiyiin & waliba jilayaal filimaanta iyo fanaaniin.
Chadil Deffy ayaa ka ah soo saare mid ka mid ah telefishinada wadankaasi Thailand waxaana talaabada uu ku kacay si weyn u hadal haya saxaafada dunida.
faarax jaamac faarax says:
waa waali baan qabaa anigu arinkaas
Jaceylku dhibaatadan odhan muqawana alla waa yaab